लगातार पेट बढिरहेको छ ? अपनाउनुस् यी सजिला तरिका – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/लगातार पेट बढिरहेको छ ? अपनाउनुस् यी सजिला तरिका
एजेन्सी – शरीर पातलो छ तर पेट भने लगातार फुल्ने समस्या लगभग १० देखि ८ मानिसहरुले भोगिरहेका हुन्छन् । पेट बढ्दा आफूलाई मन पर्ने कपडा लगाउन नपाउने तथा आफैलाई असहज महसुस हुने गर्छ ।
तर, पेट बढ्ने समस्याको समाधानका लागि घरमा नै केही उपायहरु अपानाउन सकिन्छ ।
दैनिक ३.५ लिटर पानी पिउनुस्
पेट बढेपछि कतिपय मानिसहरु पानी पिउन छोड्छन् । तर, पानीले पेट कहिल्यै बढ्दैन । पानीको कमि भएमा शरीरमा डिहाइड्रेशनको समस्या पैदा हुन्छ । त्यसैले दैनिक ३ देखि ४ लिटर पानी पिउनुस् । जसले डिहाड्रेट हुनबाट बचाउँछ र पेट बढ्न कम हुन थाल्छ ।
बिरे नुनले नुहाउनुस्
यदि तपाईंको पेट बढ्ने समस्या कम भएन भने बिरे नुन पानीले हालेर नुहाउने गर्नुस् । यसमा भएको म्याग्नेशियमले शरीरमा भएको अतिरिक्त पानीले सोस्ने काम गर्छ र तपाईंको पेट घट्दै जान्छ । तर, यो प्रक्रिया हप्तामा एक पटक मात्रै गर्ने गर्नुपर्छ । यसका लागि पानीमा दुई कप बीरे नुन मिसाउनुपर्छ ।
केरामा पोटाशियमको मात्रा भरिपूर्ण हुन्छ । यसले फुलेको पेटलाई पुनः घटाउन मद्दत गर्छ । पोटाशियमले खानामा भएको सोडियमको प्रभावलाई कम गराइदिन्छ । त्यसैले केरा खाने गर्नुपर्छ ।
यी तरकारी नखाने
यदि तपाईं पेटको समस्याले चिन्तित हुनुहुन्छ भने केही समयका लागि प्याज, ब्रोकाउली, गोभी, पत्ता गोभी जस्ता तरकारीहरु खान बन्द गर्नुपर्छ । किनकी तरकारीहरुले तपाईंको शरीरका अंगहरु बढाउने काम गर्छ ।
यी तरकारीहरुमा पोषक तत्व भरपुर मात्रामा हुन्छ । तर यसको धेरै सेवनले पेट अत्याधिक बढ्ने गर्छ ।
चुइगम वा अन्य कुनै पनि प्रकारका गमको सेवनले पेट बढाउने समस्या पैदा गर्छ । चुइगममा चिनी, अल्कोहल र कृत्रिम मिठास जस्ता सोर्बिटोल र जाइलिटोल हुन्छ । जसले पेट धेरै फुलाउने गर्छ । त्यसैले चुइगम खाइदैँन त्यसलाई चपाएर फाल्ने गरिन्छ ।
रातिको खाना छिटो खानुस्
रातिको खाना छिटो खान गर्नुपर्छ । रातिको खाना छिट्टो खाएमा कहिल्यै पनि पेट बढ्ने समस्या झेल्नुपर्दैन । त्यसैले बिहान र रातिको खानाको बीचको ग्याप १२ घण्टा राख्नुपर्छ । जसले पाचन प्रक्रिया ठीक गराउँछ ।
अदुवाले शरीरलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ । कुनै पनि पेट बढ्ने समस्याको समाधानका लागि अदुवा फाइदाजनक हुन्छ ।
चिनियाँ एप प्रतिबन्ध भएपछि १७ वर्षीय भारतीय किशोरले बनाए फाईल सेयरिंग एप
पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाख ७१ हजार पुग्यो, तीन हजार ३४२ जनाको मृत्यु
कोरोनाकै बिच भारतमा अर्को प्रकोप, चट्याङ्ग लागेर १ सय १२ जनाको मृत्यु